Anozvipira - Imbokodo
Mibvunzo Inobvunzwa Zvakanyanya
Vanhu vangani vachange vari mutsvakurudzo ino uye ndiani anokwanisa kupinda?
Tsvakurudzo ichapinza madzimai angangoita 2600 muSouth Africa, Malawi, Mozambique, Zambia neZimbabwe. Kuti vapinde mutsvakurudzo, madzimai anofanira kuva vatano, vasina hutachiona hwe HIV, uye mazera ari pakati pemakore 18 kusvika 35. Madzimai aya anofanira kuva achida kuitwa ongororo dzehutano uye kupangwa mazano nezveHIV nekuongororwa HIV. Havafaniri kunge vakazvitakura kana vachiyamwisa. Pane zvimwe zvinotarisirwa zvakare kuti munhu akodzere kupinda mutsvakurudzo.
Chii chaungatarisira kana ukanga wafunga kuzvipira.
Tichapindura chero ipi mIbvunzo yamunayo kuitira kuti munzwisise zvinowanikwa nokuva kwenyu mutsvakurudzo ino.
Muchaitwa ongororo yemuviri inosanganisira ongororo yeropa. Zvitorwa zveropa zvichashandiswa: kuongorora utachiona hweHIV; kutarisa kuti muviri wenyu unodaira sei kumishonga inodzivirira zvirwere yetsvakurudzo; kutarisa ongororo dzakashomeka dzemagene (limited genetic testing) uye dzimwe ongororo dzichabatsira vaongorori kunzwisisa hutano neimmune system yeari mutsvakurudzo zviri nani.
Munguva yetsvakurudzo, muchaenda kukiriniki kangangokwana kagumi nenomwe (17) mumakore matatu. Pakushanya kana kwekushanya uku muchawana majekiseni emishonga wetsvakurudzo unodzivirira zvirwere kana kuti zviyereso (placebos). Tichiverenga ose muchawana majekiseni matanhatu munguva yetsvakurudzo.
Muchakumbirwa kuti mucherechedze zvamunenge muchinzwa kwamazuva matatu kusvika rechinomwe mushure mekupihwa jekiseni roga roga. Mushure menguva iyi imi nevashandi vepakiriniki muchakurukura kuona kuti muri kunzwa sei.
Kushanya kwekuteverera kuchasanganisira kupangwa mazano nezveHIV, uye kuongororwa HIV, nekupindura mibvunzo kubva kuvashandi vepakiriniki. Kushanya uku kuchava kuri kupfupi tichienzanisa nekushanya kwepamunopihwa majekiseni.
Kupangwa mazano maererano neHIV kuchakupai nzira dzakanakisa dzekuzvidzivirira kubva kuhutachiona hweHIV panguva yetsvakurudzo.
Tsvakurudzo ichaitwa rinhi uye kupi?
Tsvakurudzo ichatanga kupinza vanhu mutsvakurudzo mumwedzi waMbudzi 2017 uye iri kuitwa panzvimbo dzakasiyana muSouth Africa, Malawi, Mozambique, Zambia, neZimbabwe.